I-pancreatitis: ukuhlaselwa nemiphumela yako > Amanyikwe
Ungasusa kanjani ukuhlaselwa kwe-pancreatitis?
Kufanele kuvunyelwe ukuthi imikhuba emibi iphazamise kakhulu ukusebenza kwazo zonke izitho zangaphakathi. Imilutha eminingi eyonakalisayo igadla kumanyikwe. Indlela yokuphila eyingozi iholela ekuvuvukeni kwayo. Ngolimi lodokotela, lesi sifo sibizwa nge- pancreatitis. Isiguli sinayo yonke imizwa yokuzwa okungathandeki, njengokucanuzelelwa kwenhliziyo, ukuhlanza. Kodwa ukubonakaliswa okungathandeki kakhulu okuhambisana ne-pancreatitis yizindlela ezinobuhlungu. Ungayelapha kanjani i-pathology? Futhi yini engenziwa ekhaya?
I-pancreas yisitho esibalulekile sangaphakathi esikuvumela ukuthi udonse kahle ukudla okungena emzimbeni womuntu. Ifihla ama-hormone amaningi nama-enzyme, kufaka phakathi i-insulin ne-glucagon.
Inqubo yokuvuvukala eyenzeka kumanyikwe ibizwa ngokuthi yi-pancreatitis. Ukushiswa ngamandla kwama-enzyme emzimbeni kuholela ekuguvukeni nasekucasukeni. Le nto ingenzeka ngokungazelelwe, kepha ingaqhubeka iminyaka.
Le pathology ichazwa umlando wezokwelapha. I-pancreatitis, ngokwezifundo, ingaba yingozi noma ihlala isikhathi eside. Kodwa-ke, kunoma yikuphi, isifo esinjalo siholela ekubhujisweni kancane kancane kwesitho esibalulekile kuhlelo lokugaya ukudla.
Izimbangela eziphambili ze-pathology
Ekuqaleni, sibheka ukuthi imiphi imithombo eholela ekukhuleni kwesifo esinjenge-pancreatitis. Ukuhlaselwa, njengomthetho, kwenzeka lapho lezi zinto zimbi. Kepha, ngeshwa, akuvamile ukuba kutholakale izimbangela eziholela ku-pathology lapho amanyunyu egaya ngokwawo.
Odokotela banikeza lezi zinto ezilandelayo, njengomphumela wokuthi i-pancreatitis itholakala kaningi kangakanani:
Ukudla okungenampilo. Ukuhlukunyezwa kokudla okungenamsoco (okubabayo, okunamafutha, okuthosiwe) kungavusa ukuhlaselwa yi-pancreatitis. Yini okufanele uyenze kuleli cala? Yenqaba ukudla okungenampilo futhi uthintane nokudla. Ukudla okunamafutha kumunca kabi umzimba. Ngenxa yalokhu, kukhona ukwephulwa kokuphuma kwejusi le-pancreatic. Ngasikhathi sinye, ukwakheka kwawo kuyashintsha. Izici ezinjalo zivusa isicanucanu, izinhlungu.
Ukulimala kwe-pancreatic. Ukulimala kwesitho kungadalwa ukushaywa okuqinile esiswini, ingozi yemoto, ukuwa kusuka endaweni ephakeme, ummese noma isilonda sokudubula. Kwesinye isikhathi lesi simo sidinga ukungenelela kokuhlinzwa.
Ukuthatha umuthi othile. Izidakamizwa ezithile zingakuthinta kabi ukusebenza kwamanyikwe. Ama-antibiotic, ama-immunosuppressants, ama-corticosteroids akwazi kalula ukuvusa ukuhlaselwa yi-pancreatitis. Yini okufanele uyenze esigulini? Yenqaba le mithi bese ulandela ukudla.
Ukusebenzisa kabi utshwala. Iziphuzo eziqukethe notshwala zinomphumela ongemuhle kakhulu ezithweni eziningi. Amanyikwe awekho. Naso lesi sithombe sibhekwa njengokungondleki. Ukuphuma kwejusi le-pancreatic kuthinteke kakhulu emzimbeni, ngenxa yalokho lesi sifo sivela.
Ukungondleki. Kulokhu, ukudla kwamaprotheni kusho. Uma umzimba uvame ukuhlupheka ngenxa yokushoda kwalezi zinto, umuntu uqala ukuba ne-pancreatitis.
Amatshe. Ukukhuphuka, ukuhamba emiseleni ye-bile, kunomthelela ekuphulweni kokuphuma kwejusi futhi kuvuse ukuvuvukala kwesitho. Ngenxa yalokhu, isiguli sithola isicanucanu, ukugabha, izinhlungu, isiyezi.
I-pathology yesisu. Kwesinye isikhathi izifo ezahlukahlukene zingavusa ukuhlaselwa okungajabulisi.
Ngalesi sifo, izimpawu ezijwayelekile zibonwa iziguli. Cishe wonke umlando wezokwelapha uqukethe lezo zimpawu. I-pancreatitis ibonakaliswa ngobuhlungu obukhulu. Kulokhu, ukungakhululeki kungahlala amahora amaningi.
Izimpawu ezilandelayo ziyimpawu ye-pancreatitis:
Ubuhlungu besisu. Isibonakaliso esiyisisekelo futhi esivame kakhulu. Kubonakala cishe ezigulini ezingama-80-95%. Ubuhlungu bungahlala buhlala noma buhlala buhlulwa, buvutha noma bukhahlameza, ku-spastic noma kubuhlungu. Ukungajabuli kutholakala endaweni esiswini phezulu kwesobunxele esifundeni se-epigastric. Ngakho-ke i-pancreatitis eyingozi ibonakala. Ukuhlaselwa kuvame ukuqina ngemuva kokudla ukudla (emva kwemizuzu engama-20-30). Isiguli sihlangabezana nokungajabuli okukhulu ngemuva kokudla okuthosiwe, okunamafutha, okunezipayisi, ukubhema ukudla noma ukuphuza utshwala. Ubuhlungu bungasakazekela emuva, i-clavicle yangakwesobunxele, i-blade ehlombe, ingalo. Kaningi, ukungakhululeki kuyabhinca. Ngokubulawa yindlala, lokhu kuboniswa kuncishiswa kakhulu. Ukuma okuphoqiwe kusiza nasekunciphiseni ukungaphatheki kahle: Kulula ukuthi isiguli sithwale izinhlungu lapho sihleli, sincika phambili kancane.
Isifo sohudo Isibonakaliso esinjalo siyabonakala engxenyeni yeziguli. Isihlalo sinephunga elingajabulisi, sinokuguquguquka okungaguquki. Ezindlwini, amafutha angaphanjwanga ayabonakala.
Ukwehla kwesisindo. Izimpawu ezijwayelekile. Kwangathi kungaba nokuhlaselwa kwe-pancreatitis engamahlalakhona. Njengomthetho, ibonwa ezigabeni zokugcina zalesi sifo.
Isicanucanu, ukuhlanza. I-Symbomatology enjalo ayilethi impumuzo esigulini. Ngasikhathi sinye, kuhlanganiswe nesifo sohudo, ukhuculula umzimba emzimbeni. Ukuqina kwesikhumba kuyancipha, izinombolo zomzimba zome kakhulu. Ukukhonjwa kwezici zobuso kuyabonakala.
Ukuvalwa kwe-duct ye-bile. “Amaconsi abomvu” avela ebusweni besisu nasesifubeni. Ngemuva kokucindezela, azinyamalali. Kwesinye isikhathi kuba nokuqwashisa kolwelwesi lwama-mucous kanye nesikhumba ngenxa yokunciphisa i-duct nge-gland evuvukayo.
Umkhuhlane, ukubanda, ukuphefumula. Izimpawu ezinjalo zikhombisa inqubo yokuvuvukala emzimbeni. Kulokhu, kuyadingeka ukuqala ukwelashwa okwanele ngokushesha. Noma yikuphi ukubambezeleka kungaholela ezinkingeni ezinkulu impela.
Ngemuva kokuhlaselwa okuningana, lesi sifo sihlala singamahlalakhona. Kulokhu, isiguli kwesinye isikhathi sithola zonke izimpawu ezikhombisa ukuthi kukhona i-pancreatitis. Kepha into engathandeki kakhulu ukubhujiswa kwesitho.
Ukwelapha okwanele kunqunyelwa udokotela kuphela. Ukuzilapha, ikakhulukazi ukungazi ukutholakala kweqiniso, kuyingozi enkulu. Ngasikhathi sinye, khumbula ukuthi ukungaphatheki kahle esiswini akumele kungabekezelelwa futhi kukhishwe ngabahlaziyi. Noma ngabe uyakwazi ukudambisa ukuhlaselwa kwe-pancreatitis ekhaya, kufanele uhlolwe nakanjani. Lokhu kuzovikela ekuthuthukisweni kwezinkinga ezingezinhle neze.
Uma uhlangabezana nokungajabuli esiswini, kufanele ufune usizo kudokotela we-gastroenterologist. Uma isiguli sizwa izinhlungu “ezisontekile” ezinzima, kubalulekile ukubiza i-ambulensi ngokushesha. Kodwa-ke, ngenkathi iqembu lezokwelapha lihamba, kungenzeka ukunciphisa isimo sesiguli esithola ukuhlaselwa yi-pancreatitis.
Usizo lokuqala lubandakanya izincomo ezilandelayo:
Ukwemukelwa kwe-antispasmodics. Izidakamizwa ezinjalo zingakhulula i-spasm. Ngakho-ke, ukuqinisekisa ukuphuma kwe-lumen kumathumbu wejusi le-pancreatic. Kulokhu, kunconywa ukuthi ungasebenzisi amaphilisi hhayi imijovo. Bazosebenza ngokunempumelelo nangendlela esheshayo. Umuthi osebenza kakhulu yi-No-shpa.
Imithi yokugaya. Isiguli sinconywa ukuthi siphuze amalungiselelo e-enzymatic: Festal, Mezim, Pancreatin. Lezi zimali zisiza ukuthuthukisa ukugaya futhi zidambise izinhlungu.
Kubanda esiswini. Inqubo enjalo izosiza kakhulu isimo sesiguli. Noma kunjalo, ungasebenzisi amakhaza eqhwa. Kulokhu, esikhundleni sokukhululeka, ungayandisa inkinga. Kuyalulekwa ukusebenzisa i-heating pad egcwele ngamanzi abandayo, noma iqhwa eligoqwe esikhwameni nasendwangu. Lo mcimbi ngeke unciphise ukungaphatheki kahle kobuhlungu kuphela, kepha kuzonciphisa ukuvuvukala.
Odokotela, abachaza ukuthi banciphisa kanjani ukuhlaselwa kwe-pancreatitis, ikakhulukazi bagcizelela ukuthi kungabekwa noma yikuphi ukudla. Isiguli sidinga kuphela ukuphuza. Kulokhu, kungcono kakhulu ukunikeza amanzi ahlanzekile ajwayelekile noma amaminerali amanzi ngaphandle kwegesi.
Ezimweni ezinzima, isiguli sizodinga ukulaliswa esibhedlela. Kepha kwesinye isikhathi, ngemuva kokuxilongwa ngokuphelele, udokotela ubeka impatho efanele esigulini futhi angayi naye esibhedlela. Kulokhu, kubaluleke kakhulu ukwazi abantu abaseduze kwesiguli ukuthi bangakhulula kanjani ukuhlaselwa kwe-pancreatitis ekhaya. Kuyinto efiselekayo ukuthi izidakamizwa ze-No-Shpa nezidakamizwa ze-enzymatic zihlala ziseduze.
Izincomo ezilula impela zikuvumela ukuthi ugweme ukuhlaselwa okuphindwayo:
Indlala. Indlela yokugaya ukudla kufanele idambiswe ngokuphelele. Kulokhu, i-iron izoma ukukhiqiza ama-enzyme ayilimazayo. Ngakho-ke, iziguli zivunyelwe ukusebenzisa kuphela amanzi, itiye kanye ne-crackers ezinsukwini ezimbalwa zokuqala.
Chill. Ukushisa ama-pancreas akuvunyelwe ngokuphelele. Le nqubo izoholela ekwandeni kokuvuvukala futhi izoba nesandla ekubhujisweni kwama-pancreas ngamahomoni ayo uqobo. Khumbula: i-hypochondrium yesobunxele "ikhetha" ukubanda! Ngakho-ke, ukufudumeza kweqhwa kufanele kufakwe kumanyikwe.
Ukuthula. I-Pathology ingaholela kalula ekuthuthukisweni kwemiphumela emibi. Ngakho-ke, odokotela batusa ngokuqinile ukuthi wengeze umthwalo emzimbeni wonke. Iziguli ziyelulekwa ukuba zigcinele ukuphumula kombhede kuze kube yilapho izimpawu zepancreatitis ebaluleke zinganyakazi ngokuphelele.
Iyini i-pancreatitis eyingozi? Ukuhlaselwa akudluli ngaphandle kokulandela umkhondo futhi kuvame ukuholela ezinkingeni ezingezinhle.
izicubu ze-necrotic ze-gland.
Ngokuphazamiseka okubucayi, isiguli sizodinga ukungenelela kokuhlinzwa. Ngemuva kokuhlinzwa, isiguli sivame ukunikezwa i-insulin ukulawula amazinga kashukela. Ngaphezu kwalokho, kunconywa imithi ekhethekile equkethe ama-enzyme aqinisekisa ukugaya okujwayelekile kwamafutha namaprotheni.
Akubalulekanga kangako ekudleni kokudla, okuthi esigabeni esingamahlalakhona, isiguli kuyodingeka sigcine impilo yaso yonke. Futhi ubushiye ngokuphelele obunye utshwala.
I-pancreatitis engalapheki ingadala izinkinga ezilandelayo:
ukuvaleka kwemithambo yegazi
ukugcwala koketshezi endaweni yendlala,
ngezikhathi ezithile zobuhlungu
ukuvaleka kwamathumbu amancane ne-bile ducts,
ingozi yokuthola umdlavuza we-pancreatic.
Umsoco ngemuva kokuhlaselwa kanzima
Iziguli zinconyelwa ekudleni onguNombolo 5 we-pancreatitis. Kodwa-ke, ngemuva kokuhlaselwa kanzima izinsuku eziningana, kufanele uvikele ukusetshenziswa kokudla.
Ama-Dietitians ancoma le mithetho elandelayo:
Izinsuku ezingama-2-4, isiguli kwesinye isikhathi senqatshelwe ukuthatha ukudla. Kunconywa ukusebenzisa kuphela amaminerali wokuphilisa wamanzi, njengeBorjomi, Essentuki No. 4. Kufanele uphuze ngamanani amancane kumaswidi amancane.
Usuku lwesihlanu. Kuvunyelwe ngokucophelela ukwandisa imenyu. Kulokhu, kufanele wazi ukuthi isiguli simiselwe itafula le-pancreatitis No. 5P.
I-6-7 usuku. Ukudla kufaka isobho le-mucous, i-jelly, okusanhlamvu okulamanzi, i-kefir, izihlahla ezintshontsha zenyama yenkomo, inkukhu nenhlanzi. Kuvunyelwe: amazambane abunjiwe, imifino. Zonke izitsha ezine-pancreatitis kufanele zidliwe noma zibiliswe. Isiguli singaphuza itiye elibuthakathaka, ama-apula acubuziwe, amakhukhi, umhluzi we-rose yasendle.
Le pathology inegama elilodwa elingasebenzi - i-prediabetes. Ngeshwa, uma kukhulunywa nge-pancreatitis engapheli, amathuba okuba nesifo esibi kangako aphezulu. Ukugwema ukuvela kwesifo sikashukela, iziguli zibekelwa ukudla uNo 5 wokuhlanza i-pancreatitis. Lokhu kudla kufanele kulandelwe kukho konke impilo.
Okuyisisekelo kokudla okunempilo yimikhiqizo elandelayo:
ubisi, i-kefir, ushizi omnene, iyogathi, i-curd emuncu,
ipasta, okusanhlamvu (ilayisi, i-oats, i-buckwheat),
imifino (i-beet, i-zucchini, izaqathi, ithanga, amazambane),
isinkwa esimhlophe, amabhele kakolweni,
inyama (turkey, unogwaja, inkukhu, i-veal),
ijeli yezithelo, ama-apula abhakwe, isigaxa se-berry,
ama-decoctions wama-oats, iziphuzo zezithelo, itiye le-chamomile, iziphuzo zezithelo ezingekho acidic,
isobho elibunjiwe, umhluzi wemifino.
Kusuka ekudleni kufanele kungafakwa:
iklabishi entsha, izithelo ezimuncu, izindle,
sorrel, isithombo, isipinashi, isithombo,
isinkwa esisha, amaswidi, i-muffin,
izinongo namakha ashisayo,
ukudla okusemathinini, inyama ebhemayo, amasoseji, amaqanda,
inhlanzi, umhluzi wenyama, i-borscht, isobho seklabishi,
ushukela omnandi, utshwala,
u-ayisikhilimu, ukhilimu, ukhilimu omuncu,
Lokhu kudla kuhlanganisa ukudla cishe izikhathi eziyisithupha ngosuku, izingxenye ezincane. Lokhu kuzogwema ubungozi bokudla ngokweqile.
Ngokumangazayo, ngale ndlela yokusebenza kwezifo, zonke iziguli zincoma into eyodwa: xhumana nodokotela wezitho zangasese futhi ungabambezeli ukwelashwa! Ngabe iziguli ezitholakala ukuthi zine-pancreatitis zifakazelani? Ukubuyekezwa kweziguli kutshela ngokuthuthuka okukhulu enhlalakahleni ngemuva kwemithi enqunywe ngudokotela kanye nokubambelela ekudleni okunqunyelwe.
Iningi leziguli lithi ngemuva kokwelashwa isikhathi eside bakwazile nokubuyela ekudleni kwabo okujwayelekile. Futhi ngesikhathi esifanayo abasazitholi izimpawu ezibuhlungu zimpawu.
Izindatshana zesazi sezokwelapha
Kuyiqiniso, isiguli uqobo nezihlobo zayo ezisondelene bayazibuza, kodwa bangakhulula kanjani ukuhlaselwa kwe-pancreatitis lapho kwenzeka?
Kunezincomo ezilula nezingabizi ezizosiza kule ndaba:
Amahora okuqala ngemuva kokuqala kokuhlaselwa kwenqatshelwe ngokuqinile ukuphatha noma yikuphi ukudla.
Eziziphuzweni ungaphuza amanzi ahlanzekile (ahlanziwe, entwasahlobo). Ungangeni emanzini amaminerali, ngoba awukwazi ukubikezela umphumela wawo esimweni sesiguli kuleli cala. Amanzi athathwa kancane, kancane, ngesivinini esikhulu. Kungcono ukubamba amanzi isikhashana emlonyeni ukuze uketshezi luqale ukumunca seluvele emgodini womlomo.
I-Ice ibekwa esifundeni se-epigastric, okuwukuthi, emcimbini wokuqalwa kwamanyikwe wamanyikwe ebusweni bomzimba. Indawo le ndawo ingachazwa ngamagama alandelayo - itholakala phakathi kwesifuba nenkaba. Njengendlela yokuvuselela abanye, iphini lokushisa eligcwele ngamanzi abandayo lifaneleka kahle. Ungathatha noma yiliphi iphakethe kusuka kufriji esiqandisini bese ulibeka kule ndawo.
Umcimbi onjalo uzokwazi ukunciphisa isimo sesiguli, wehlise ukuqina kobuhlungu, kanye nezinqubo zokuvuvukala nokuvuvukala.
Isiguli sinconywa ukuphumula kombhede esimweni sokuphumula okuphelele. Lokhu kuyadingeka ukuze kudambise ukungezwani emanyengeni nasekugcotshweni kwemithambo yegazi lakhe ngegazi.
Ochwepheshe batusa ukusebenzisa izindlela zokuthatha i-spasmolytics kanye ne-analgesics. Kulokhu, kubalulekile ukuba ube nezidakamizwa zeNo-shpa, Spazmalgon, Drotaverin, Maksigan kwikhabethe lezokwelapha.
Isiguli noma abantu abasondelene nayo kufanele nakanjani bashayele iqembu le-ambulensi, odokotela babo abazokwazi ukuqonda lesi simo futhi basebenzise ezinye izindlela zokwelashwa.
Kwesinye isikhathi abantu benqaba ukuguqukela ezinsizakalweni zokwelashwa eziphuthumayo kuphela ngenxa yezizathu zokuthobeka kwamanga namahloni. Ungazami inhlanhla yakho futhi unganaki izinsiza zochwepheshe. Noma ngabe inkinga yanda ngokweqile, kungaba ukukhathazeka okungcono ngempilo yakho kunokunganakwa kwezimpawu ezinkulu.
I-pancreatitis ibonakala ngokuthi ukuthuthuka kwesikhashana kungenzeka, kepha-ke umphumela olandelako ungalandela. Futhi lokhu uma uqinisa ikhambi lenkinga futhi ugwema ukuhlolwa, wenza ukuxilongwa okuyikho nokwelashwa okufanele.
Ezimweni eziningi, ukuhlaselwa kwe-pancreatitis kuvusa ukuphulwa kwe-gallbladder, okungukuthi ukuphuma okujwayelekile kwe-bile okuvela kulesi sitho. Uma isiguli sazi ngokuqinisekile ukuthi asinawo amatshe esibayeni sakhe senyongo, singamcebisa ukuthi athathe amaphilisi amabili omuthi i-Alohol. Lokhu akufanele kwenziwe kanye, kodwa kathathu ngosuku. Lapho i-bile ihamba, iba iyaqondakala, ngoba isihlalo sesiguli siba uketshezi. Lokhu kuhamba kwe-bile kuyasiza ekuhlaselweni kwe-pancreatitis, ngoba kuvusa indalo yemvelo yejusi yesisu kusuka kumanyikwe. Iphuzu elibalulekile ukuthi i-Alohol ithathwa kuphela ngokuhlanganiswa ne-antispasmodics - No-shpa, Drotaverin, Papaverin.
Imithi yokuhlaselwa i-pancreatitis
Sibala yonke imishanguzo esetshenziselwa ukudambisa isimo esibuhlungu sesiguli. Umuthi wokuhlasela i-pancreatitis uluhlu lonke lwezidakamizwa:
I-No-spa - yisidakamizwa se-spasmolytic esetshenziswa emizuzwini noma amahora okuqala kokuhlaselwa ngendlela yamaphilisi.
IDrotaverine hydrochloride futhi ingumuthi onomphumela we-antispasmodic, ongasetshenziswa esikhundleni seNo-shpa. Kusetshenziswa kwifomu lethebhulethi.
I-Spazmalgon isidakamizwa esinomphumela ofanayo we-spasmolytic. Kunconyelwa ukusebenzisa ukukhulula izwe eliphakeme ngesikhathi sokuhlasela, okubuye kuthathwe kufomu lethebhulethi.
UMaxigan uyi-antispasmodic efanayo nazo zonke izidakamizwa ezedlule ezinefomu lethebhulethi efanayo.
I-Papaverine yi-antispasmodic, efakwa ngaphakathi emzimbeni, ngokuhambisana nezindlela zomlomo zezidakamizwa ze-antispasmodic.
I-Alocholum - amaphilisi adinga ukuthi ahanjiswe ngesiguli ngasikhathi sinye nemithi ye-antispasmodic, uma engenawo amatshe emgodini wesibeletho.
IKontrikal - isetshenziswa kuphela ngabasebenzi esibhedlela. Isiza ukudambisa ukwethuka kobuhlungu ekuhlaselweni kwe-pancreatitis, futhi futhi ibambe iqhaza ekubuyiselweni kwezicubu ze-pancreatic.
Ungasusa kanjani ngokushesha ukuhlaselwa kwe-pancreatitis?
Imvamisa, umuntu ogulayo kanye nomndeni wakhe bazibuza lo mbuzo: ukuthi ungasusa kanjani ngokushesha ukuhlaselwa kwe-pancreatitis? Ikakhulu ekhaya futhi ngaphandle kwabasebenzi bezokwelapha. Yize lokhu kudangele kakhulu, kungcono ukubiza usizo oluphuthumayo futhi wethembe ochwepheshe.
Kepha, noma kunjalo, kunezimo lapho ingekho indlela yokusebenzisa ukusekela kwabasebenzi bezokwelapha, futhi isiguli sidinga usizo oluphuthumayo. Kulesi simo, kunconywa ukwenza okulandelayo: ukuhlinzeka isiguli ukuthula, ukubanda nendlala. Lokhu akuyona izingathekiso, kepha ngumhlahlandlela wesenzo.
Ngakho-ke, kunconywa ezihlotsheni zomuntu ogulayo:
Mnikeze ukuthula okuphelele. Awukwazi ukwenza ukunyakaza okungazelelwe. Isiguli kufanele sinikezwe u-0.8 mg we-No-shpa noma iDrotaverin hydrochloride futhi sihlanzwe ngamanzi ngesibalo esingadluli kwengilazi yekota.
I-Intramuscularly injected solution yePapaverine ngesilinganiso semilitha emibili. Ungangena esikhundleni sePatverine ngenani elifanayo le-No-shpa solution.
Ngemuva kwalokho isiguli sihlala phansi esihlalweni noma esihlalweni, bese umzimba wakhe uncika phambili. Ukusuka phambili udinga ukusekela okuthile ukuze ukwazi ukuthwala isisindo somzimba nekhanda.
Ngasemuva endaweni yokuqagela kwamanyikwe kufakwa noma yisiphi isiqukathi esineqhwa (i-heating pad, isikhwama, nokunye).
Isiguli senqatshelwe ukudla ukudla.
Amanzi athathwa ngesilinganiso sekomishi yekota ngesikhathi. I-ketshezi isetshenziswa njalo ngehora lehora futhi ingabi ngaphezulu kwesilinganiso esikhonjwe ngaphambilini. Amanzi amsulwa kuphela ngaphandle kwegesi asebenza njengesiphuzo.
Kwenqatshelwe ukunikeza isiguli izidakamizwa ezinjengeCreon, iPazinorm njalonjalo, equkethe ama-enzyme e-pancreatic. Ukunganakwa kwalesi sincomo kungakhulisa izimpawu zokuhlasela kwe-pancreatitis.
Lapho bekuncenga ukuthi uhlanzisise, kubalulekile ukuthi uhlanze isisu sesiguli ngokucindezela ngeminwe emibili ezimpandeni zolimi. Ezimweni eziningi, ukuhlaselwa kwe-pancreatitis ngemuva kokukhishwa kokuhlanza, kepha lokhu kuphumula kuza ngesikhathi.
Kungani kwenzeka ukuhlaselwa?
Ngaphambi kokusho ukuthi ungabuqeda kanjani ubuhlungu be-pancreatitis ekhaya, kubalulekile ukusho amagama ambalwa ukuthi kungani lesi sifo siba sibi, ngoba lokhu kungasiza abaningi ngokuzayo ukuthi bagweme izimo ezinjalo.
Ukuqhuma kwe-pancreatitis kwenzeka ngenxa yokuvuvukala komoya okuyi-pancreatic parenchyma, ngenxa yalokho izicubu zayo ziyavuvukala bese ziqala ukucindezela izindunduma zesitho. Ngenxa yalokhu, i-lumen yabo incishisiwe futhi isiphuze i-pancreatic, equkethe ama-enzymes wokugaya, angeke idluliselwe kwi-duodenum, njengoba kufanele, kodwa ihlala ngaphakathi kwe-gland, iqala ukugaya amaseli ayo. Lokhu yilokho okubangela isifo esinamandla sobuhlungu, okuthi ngomqondo ongokoqobo wegama lithathe isiguli.
Ukuvuvukala ukusabela okungokwemvelo kwesitho emiphumeleni yezinto ezingezinhle, kufaka phakathi:
ukwenqaba ukulandela ukudla
Empeleni, zonke lezi zinto ezingezinhle zingumphumela wokuhola indlela yokuphila engalungile. Ngakho-ke, ukuze ugweme ukwanda kwe-pancreatitis ngokuzayo noma ukunciphisa ukwehla kwayo, isiguli simane sidele imikhuba emibi, silandele ngokuqinile isidlo, sizinike isikhathi sokulala esezingeni elifanele (udinga ukulala okungenani amahora angama-8) bese uzama ukugwema izimo ezicindezelayo noma ufunde ukulawula isimo sakho somzwelo.
Kodwa-ke, uma umuntu enezinye izifo ezibuye zibe nomthelela omubi kumanyikwe (ngokwesibonelo, isilonda se-peptic noma isifo se-gallstone), ngeshwa, ukuvama kakhulu okuvamile ngeke kugwenywe. Futhi kulokhu, isiguli simane nje kufanele sazi imithetho eyisisekelo yokudambisa izinhlungu, ezomsiza ukuthi abhekane nokuhlaselwa uqobo.
Izikhathi eziyisihluthulelo zokumisa ukuhlaselwa
Uma, lapho kuhlaselwa kwenzeka, isimo sesiguli sihilela ukuba kwakhe ekhaya futhi asidingi ukubiza iqembu le-ambulensi, kulokhu kufanele:
Landela ukudla okubulawa yindlala. Ngesikhathi sokuqhuma kwe-pancreatitis, awukwazi ukudla noma yini izinsuku eziningana. Lokhu kungenxa yokuthi lapho umuntu edla ukudla, ipancreas ithola umyalo wokukhiqiza ama-enzymes wokugaya ukudla. Futhi njengoba bengakwazi ukungena ngaphakathi kwe-duodenum ngenxa yokukhanya okunciphisiwe kwama-ducts, bahlala ngaphakathi kwesitho futhi baqinise imizwa ebuhlungu. Futhi ukuze sinciphise ukwakheka kwama-enzyme wokugaya ukudla futhi sinciphise izinhlungu, kuyadingeka ukwenqaba ukudla ukudla okungenani izinsuku ezi-2. Okwamanje, kuphela amanzi avumelekile ukuthi achithwe ngamanani amancane nangezikhathi ezithile.
Sebenzisa isidakamizwa se-antispasmodic. Kulezi, i-No-shpa idume kakhulu futhi iphephile. Kepha ngesimo samathebhulethi angeke sithathwe, ngoba umuthi uqala ukungena esiswini, ngaleyo ndlela uvuselele ukukhiqizwa kwama-enzymes wokugaya ukudla kanye nokuqinisa izinhlungu. Ngakho-ke, ukudambisa ukuhlaselwa, kuyadingeka ukusebenzisa izidakamizwa ze-antispasmodic ngendlela yezixazululo zokulawulwa kwe-intramuscular.
Uma isiguli sinokuhlanza okukhulu nohudo ngesikhathi sokwanda kwe-pancreatitis, ngalesi sikhathi kubaluleke kakhulu ukuvimbela ukonakala komzimba. Ukuze wenze lokhu, njalo ngemizuzu engama-30 ukuya kwengama-40, nikeza isiguli amanzi ngenani le-¼ inkomishi. Uma ekhaya kunezidakamizwa ze-antiemetic ne-antidiarrheal ngendlela yezixazululo zokulawulwa kwe-intramuscular, ungafaka umjovo.
Ukuqeda i-pain syndrome uqobo, akufanele unikeze abaguli ababulala abaguli. Kuzokwanela ukwenza umjovo weNo-shpa bese ufaka i-compress ebandayo kuma-pancreas. I-No-spa izosiza ukukhulula imisipha emiseleni ye-gland, ngaleyo ndlela ithuthukise amandla wejusi le-pancreatic, futhi i-compress izonciphisa ubukhulu bezinhlungu futhi ithuthukise nesimo sesiguli.
Ukunciphisa izinhlungu, odokotela baphinde bancome ukuhlala isiguli ngendlela efanele. Ukuze wenze lokhu, kuyadingeka ukumbeka, kepha ukuze umzimba wakhe ophakeme uhanjiselwe phambili, nemilenze yakhe icindezelwe esiswini sakhe. Ngamanye amagama, udinga ukuthatha isici sembungu, kuphela esimeni sokuhlala. Uma isiguli sinokuhlanza okukhulu, kufanele kubekwe umcengezi noma esinye isitsha eceleni kwakhe.
Esimweni lapho isimo sesiguli ngemuva kwezinyathelo ezinjalo singathuthuki kungakapheli amahora angama-2-3, kuyadingeka ukubiza iqembu le-ambulensi. Esimweni esinjalo, odokotela kumele basuse ukuhlaselwa. Kusukela uma izinqubo ze-pathreas ezinzima zepancreas zihlala isikhathi eside, lokhu kungaholela ku-necrosis, lapho kubhekwa khona ukufa kwezicubu ze-gland. Kulokhu, ukubuyisa ukusebenza kwayo sekuzoba okungenangqondo.
Imvamisa imbangela yokwanda kwe-pancreatitis i-gallbladder dysfunction, ngenxa yalokho ukuphuma kwe-bile kuphazamisekile futhi nokuqina kwayo kwenzeka. Kulokhu, ukuvimbela izinhlungu, odokotela batusa ukuthatha i-Allochol amahlandla ama-3 ngosuku. Kepha lesi sidakamizwa sinezimpawu zokuphambana, phakathi kwazo kukhona isifo se-gallstone, futhi uma sikhona, kwenqatshelwe ngokuphelele ukusithatha, ngoba lokhu kungaholela ekuwohlokeni okubukhali enhlalakahleni yesiguli.
Khumbula ukuthi ukwanda kwe-pancreatitis kanye nokuvela kobuhlungu kungenzeka ngaphansi kwethonya lezinto ezahlukahlukene. Futhi uma izimbangela eziqondile ezenze ukuthi lokhu kukhukhumaleke zingatholakali, awukwazi ukuthatha noma yiziphi izidakamizwa ngaphandle kwemiyalelo kadokotela. Lokhu kungaholeli ekuwohlokeni kuphela enhlalakahleni, kepha nasezinkinga ezinkulu zempilo.
Yini okufanele uyenze ngemuva kokumisa ukuhlaselwa?
Ukuvimbela ukwenzeka kokunye ukuhlaselwa, kuyadingeka ukwenza ukwelashwa okubizwa ngokuthi lokuvuselela umzimba. Kusho ukuthi:
ukuthatha izidakamizwa ze-enzyme nezama-antispasmodic,
Ngokuqondene nokudla, kufanele kube ukugoqa. Lokho wukuthi, ngokushesha ngemuva kokumisa ukuhlasela, awukwazi ukudla konke okusondelayo. Phakathi nesonto, isisekelo sokudla kwesiguli kufanele sibe:
amazambane abunjiwe aphekwe emanzini ngaphandle kawoyela nangosawoti omncane (uma kungenzeka kungcono ukungafaki ngokuphelele),
isobho elibunjiwe kuphekwe kumhluzi wemifino,
ushizi ophansi wekotishi.
Ngemuva kwesonto, ukudla kwesiguli kungafaka izitsha zenyama nezinhlanzi, kepha kufanele zilungiswe kusuka ezinhlobonhlobo ezinamafutha aphansi enyama nenhlanzi kanye ne-steamed. Ngaso leso sikhathi, inyama nenhlanzi kufanele kube kukhethwe ngaphambili, okungukuthi, kudlule nge-grinder yenyama. Ungangeza futhi imifino nezithelo ekudleni. Ukusetshenziswa kwabo kufanele futhi kwenzeke ngesimo esihlanzwa. Awukwazi ukuzidla ziphelele.
Kepha ngemuva kwamasonto angama-4-5 ngemuva kokuhlaselwa, ungashintshela ekudleni "okujwayelekile", okunconyelwa zonke iziguli ezinezifo ze-pancreatic. Kulokhu, odokotela banquma inombolo yetafula lokwelashwa le-5. Udinga ukulandela njalo! Lokhu kudla akufaki ngokuphelele ekudleni konke ukudla "okuyingozi", okubandakanya:
konke ukudla okunamafutha nokuthosiwe,
inyama enothile nezinobho zezinhlanzi,
Chocolate ne Cocoa
ubheme inyama nezithelo
iziphuzo ezinamakhabhoni ezinotshwala.
Ukuze uvikele ukwanda okuphindaphindiwe kwe-pancreatitis, ukudla kwansuku zonke kwesiguli kumele kudwetshwe kucatshangelwa imikhiqizo evunyelwe. Futhi lokhu kufaka:
izinhlanzi zesibili kanye nomhluzi wenyama,
ukusika umusi, amadombolo, ama-meatball,
imikhiqizo yobisi neyobisi enokuqukethwe kwamafutha aphansi (hhayi ngaphezu kuka-2,5%),
uju (akukho ngaphezu kwe-1 isipuni ngosuku).
Inani elikhulu lezinto zokudla zingalungiswa kusuka kulemikhiqizo, ngakho-ke, ngombono omuhle, ukudla kwansuku zonke kwesiguli kuzohluka futhi ngasikhathi sinye sinikeze umzimba wakhe zonke izinto ezidingekayo.
Ngokuqondene nokusebenzisa izidakamizwa, ama-antispasmodics anconyelwa ukuba athathwe amasonto ama-2-3 ngemuva kokuqala kokuhlaselwa. Kepha amalungiselelo e-enzyme (uCreon, uPancreatin, uMezim, njll.) Kufanele adakwe zonke izinsuku ngesikhathi sokudla noma ngemuva kokudla.
Umuthi ohlukile ekulweni nokuhlaselwa i-pancreatitis
Umuthi ongemuhle uphinde ube nezindlela eziningi zokupheka ezilungiselela imishanguzo eminingi ekhaya, ezisiza ekulweni nesihlungu sobuhlungu esenzeka ngesikhathi sokwanda kwesifo. Kodwa zingathathwa kuphela ngemuva kokubonisana kwangaphambili nodokotela!
Ngesikhathi sokuqhuma kwe-pancreatitis, umuthi wendabuko utusa ukusetshenziswa kwe:
Ijusi lamazambane. Ihlaziya ukuvuvukala kumanyikwe futhi kusiza ukudambisa izinhlungu. Ukuyilungiselela, udinga ukuthatha izimbiza zokubamba amazambane, uwahlanze kahle ngaphansi kwamanzi agobhozayo futhi, ngaphandle kokuncibilika, udlule nge-juicer noma i-grate, bese unamathisela ujusi kusuka ekuthambekeni okuvela lapho. Phuza kufanele ½ inkomishi izikhathi 3-4 ngosuku ngaphambi kokudla.
Ubhatata nejusi karoti. Ilungiselelwe ngendlela efanayo nejusi lamazambane elihlanzekile. Kodwa-ke, kulokhu, ujusi wamazambane kanye nezaqathe uxutshwe ngesilinganiso esingu-1: 1. Thatha isiphuzo ngesilinganiso senkomishi e-1 ngaphambi kokudla.
Umhluzi oat. Ukulungiselela kwayo, kuzodingeka izinhlamvu ezi-oat okusanhlamvu. Kufanele zithathwe ngesipuni esisodwa, uthele 1 inkomishi yamanzi abilayo bese ufakwa emlilweni ophansi bese ubila imizuzu engama-30. Ngemuva kwalokho umhluzi kufanele uhlungiwe futhi uphuzwe ufudumele ngokuphelele ngaphambi kokudla. Ukukhwabanisa okunjalo kufanele kwenziwe ngaphambi kokudla ngakunye.
Kufanele kuqondwe ukuthi i-pancreatitis yisifo esibi esingaholela ekuqedeni ukungasebenzi kahle kwe-pancreatic. Futhi uma ivama kakhulu, ukuphathwa kwayo kufanele kwenziwe ngaphansi kwezimo zokumiswa ngaphansi kokuqashwa ngokuqinile kodokotela. Ngaphandle kwalokho, ungazenzela izinkinga eziningi zempilo, ngeshwa ezingehluleki.
Ukuhlaselwa kwe-pancreatitis eyingozi, izici zayo
Ukuvela kokuhlaselwa kwe-pancreatitis ebukhali kuqukethe lezi zigaba ezilandelayo: ukuhlaselwa okukhanyayo, ukutholakala kokuhlaselwa, ukulungisa (ukululama noma ukucindezelwa, ukuguqulwa kwenguqulo engalapheki), ukuhlaselwa okuphindayo okuphindaphindiwe.
Ngenxa yezizathu ezivame kakhulu okwazi ukuvusa ukuvela kokuhlaselwa ngamandla kwe-pancreatitis okuyi-pancreatitis kufaka phakathi: utshwala, ukudla okusindayo, i-pathology ye-gallbladder kanye nezibiba zayo, ukulimala okulimazayo, ukuhlinzwa, i-biopsy, umdlavuza we-pancreatic (umdlavuza), i-cholesterol ephezulu (hyperlipidemia).
Izimbangela ezihlangabezanwe njalo kufaka phakathi: izidakamizwa, i-vascular pathology, izifo ze-autoimmune, izifo (ama-virus, i-HIV, izibungu, njll.), ukungezwani komzimba, ukulunywa yinyoka, i-pancreatitis yefa, ukukhulelwa, i-pathology yezitho zomakhelwane kanye ne-pancreatitis ye-idiopathic (lapho imbangela ingeke isungulwe).
Izimpawu zokuhlasela kwe-pancreatitis zivele ngokuzumayo:
Ubuhlungu obukhulu (i-pancreatic colic)
ukukhuphuka kwenhliziyo nokuphefumula,
isicanucanu futhi mhlawumbe sokuhlanza
kwesinye isikhathi i-jaundice.
Ukuphambuka ezivivinyweni zaselebhu kuyaqoshwa. Ekuhlolweni kwegazi, kuqoshwa ukwenyuka kwezinga lama-leukocyte, ngokushintshana kufomula ye-leukocyte kwesobunxele, ukuncipha kwama-lymphocyte, ukwanda kwe-ESR.
Ukutholwa kwamamaki okuvuvukala ku-biochemistry yegazi, ukukhula kwamaprotheni e-C-reactive kanye ne-fibrinogen, njll. Kukhuphuka izinga eliphakeme lama-enzymes we-pancreatic ku-biochemistry yegazi: amylases, lipases, elastases, trypsin.
Isebenzisa izindlela zokuxilonga (i-MRI, i-CT, i-Ultra).
Kuyadingeka ukukhipha izifo ezinezikhalazo ezifanayo, ukuze ungafaki amaphutha: i-myocardial and infarction, i-ulcerst ulcer, i-cholecystitis ngamatshe kanye ne-cholecystitis eyingozi, ukuqhuma kokukhula kwe-aortic, i-reic colic nezinye izimbangela.
Ngaphezu kwalokho, ezinye izinkomba zingavela, kepha kancane njalo: Izimpawu zokuvinjwa kwamathumbu, ukuqhakaza kanye ne-flatulence (flatulence), ukomisa, izimpawu zokushaqeka, inhliziyo noma ukwehluleka kwezinso.
Izimpawu azijwayelekile: ukuqongelela uketshezi esiswini (i-ascites), i-pleural (amaphaphu) nezimpawu ze-pericardial (pericardial), ukwehla kwamazinga we-calcium, izindawo zokubhubhisa nokucekelwa phansi, i-vein thrombosis yangaphakathi, ukugula okungahambi kahle, ukulimala kobuchopho nokungaboni.
Ukuquleka kwe-pancreatitis ebukhali kuhlukaniswa ngokuqina: emnene, ngokulinganisela, ukuhlasela okunzima. Lokhu kubalulekile ekwelashweni okuqhubekayo kanye ne-prognosis.
I-Acute Pancreatitis degree emnene kuvezwe ukubonakaliswa okuncane kwezilonda ze-pancreatic. Umsebenzi okhubazekile uhlupheka kancane. Ukwakheka kwendlala kushintsha kakhulu, nge-CT scan (i-computer tomography). Ukujwayeza ukwenzeka kwesimo kwenzeka ezinsukwini ezintathu. Izinkinga azirekhodwa. Iphelela ngokuphephile ngokubuyiselwa okugcwele komsebenzi. Leli degree litholwa kuma-50% abantu abagulayo. Ukuhlaselwa kwe-pancreatitis kungaphindwa uma imbangela ingaqediwe.
Cishe i-25% yabantu ibahlaselwa ukwehla okulinganiselayo. Kwezinye izikhathi ifomu lezinkinga (ama-pseudocysts, ukuvuvukala kanye nokuxinana kuzungeze indlala, i-purulent fusion ye-gland). Mhlawumbe kuthinta ezinye izitho ezinenkinga ekusebenzeni kwazo, lesi simo sithatha izinsuku ezingama-2.
Ama-25% abantu abasele ayakhula ukuhlaselwa kanzima kwe-pancreatitis. Kubonakala ngomonakalo omkhulu wamanyikwe, izitho ezizungezile. Ukopha okulimazayo, ukwehluleka ukuphefumula, ukwahluleka kwe-renal. Isimo esisongela impilo. Izinkinga zitholakala kaningi kakhulu (i-cysts, i-pseudocysts ye-gland, i-necrosis kanye nokufakwa kabusha kwe-gland, i-coagulation disorder, ukungalingani kwe-electrolyte). Lokhu kuhlasela kuthatha izinsuku ezingaphezu kwezimbili.
Yini okufanele uyenze ngokuhlaselwa yi-pancreatitis?
Ukunakekelwa okuyisisekelo kuqukethe ukuhlola isimo sesiguli nokufuna usizo lodokotela. Ungondli, ungaphuzi, unikeze ukuthula!
Izikhalazo ezithile zibonisa ukuqala kokuhlaselwa kwe-pancreatitis eyingozi: ubuhlungu obukhulu, imvelo evamile, ukuhlanza kobuhlungu nokuphindaphinda, ukuqina kwemisipha yesisu.
Kungenzeka ukuthola izimbangela ezandulelayo ukuwohloka (ukuphuza utshwala, ukudliwa kakhulu, i-trauma, i-cholelithiasis, njll.).
Lesi sigaba sabantu singaphansi kokuhamba okuphuthumayo emnyangweni wokuhlinzwa, kuyanconywa ezimweni ezinjalo, shayela i-ambulensi ethi "03".
Udokotela we-ambulensi “03” anganciphisa izinhlungu ngokuphatha ama-painkillers, antispasmodics, kanye nezidakamizwa ezilwa nokuvuvukala.
Umnyango odingekayo uthatha izivivinyo ezidingekayo ngokushesha bese wenza i-ultrasound scan, i-CT scan (isisu esisesiswini). Ngaphezu kwalokho, ngokwemiphumela, udokotela wenza isiphetho mayelana nokuxilongwa nokwelashwa okwengeziwe. Ukwelashwa okwengeziwe kufanele kwenziwe esibhedlela.
Esigabeni sokuqala, benza ukwelashwa ngezidakamizwa, ukungenelela kokuhlinzwa kwenziwa ngokuthuthukiswa kwezinkinga.
Ukuhlaselwa kwe-pancreatitis engapheli, izici zayo
Ukuvela kokuhlaselwa kwe-pancreatitis engapheli: ukukhuphula amandla, ukukhishwa kokuqina, isixazululo (ukuxolelwa, ukwakheka kwezinkinga).
Ngokungafani nokuhlaselwa kwe-pancreatitis eyingozi, ukuhlaselwa kwe-pancreatitis engapheli kunokwehluka okuningi. Isikhathi se-pancreatitis esedlule kwesinye isikhathi sidlula izinyanga eziyisithupha, ngokushintshana kokuxhuzula kanye nezikhathi zokuphila kahle.
Isikhalazo esiyinhloko ekuhlaselweni kwe-pancreatitis engapheli siyizinhlungu ezaziwayo. Ukuhlaselwa kobuhlungu kungashintsha ngokuhamba kwesikhathi, ubungako bokuhlaselwa, indawo akuyo, ukubandakanyeka kwezitho ezisendaweni eseduze nenqubo.
Ubuhlungu bungaba ohlangothini lwesokunene, kwesobunxele noma maphakathi, bungathatha umlingiswa we-herpes ngokuvuvukala kwama-loops amathumbu. Ubuhlungu bubonakala ngokushesha ngemuva noma kwengxenye yehora ngemuva kokudla.
Ukudla kuyimbangela yobuhlungu. Ukusesha okuxilonga kuveza ukuba khona kwezinkinga, izimpawu zokuqina kwesibeletho.
Ukukhiqizwa okunganele kwama-enzymeli e-pancreatic kuvezwa kulezi zimpawu ezilandelayo: isifo sohudo noma amatoho ahambile, inani elikhulu lendle, ukuqhakaza, ukuthokomala, ukuphazamiseka kwesisu, ukulahlekelwa isifiso sokudla, indlala yamafutha, ukusinda, ukugoqa, isicanucanu, ukuhlanza okuphindaphindiwe.
Izikhalazo zihlukile, futhi azihlobene ne-pancreatitis kuphela, kodwa futhi zihlobene nezitho zomakhelwane. Njengomphumela wokuhlasela kwe-pancreatitis, insimbi iyagwilika futhi ingacindezela izitho zomakhelwane.
Ngenkambiso yokucwilisa amathumbu, kuthinteka amathumbu. UJaundice utholakala ngokunciphisa umgoqo we-gallbladder, uyivimba nangetshe. Ukucindezelwa kwemithambo ye-hepatic ne-splenic kuholela kuma-ascites, ukukhuphuka komthamo wobubanzi, nemithambo ye-varicose.
Izimpawu ze-pancreatitis esibuhlungu
Isitho esibalulekile esingaphakathi emzimbeni womuntu ama-pancreas, asiza ukugaya ukudla. Kubeka nemfihlo ama-hormone amaningi nama-enzyme adingekayo wokugaya. Ukuvuvukala kumanyikwe kubangela ukugula okufana ne-pancreatitis.
Kunezinhlobo ezimbili zalesi sifo:
Kuzona zozimbili lezi zinqubo, inqubo yokuvuvukala yamanyikwe ihambisana nobuhlungu obukhulu. Uma kungekho ukwelashwa okufanele futhi isiguli sephula isidlo, kukhona i-lesion yezicubu ze-necrotic, ngenxa yalokho, umuntu angafa.
Esimweni esibi se-pancreatitis, izimpawu ezilandelayo zivame ukwenzeka:
Ubuhlungu ku-hypochondrium ngakwesokudla,
bhinca izinhlungu emhlane
ukuntuleka kwesifiso sokudla
Izimpawu ze-tachycardia ziyabonakala.
Ngaphezu kwalokho, lobuhlungu bungenziwa buthakathaka kancane uma isiguli sihleli futhi sicindezele amadolo akhe. Noma ngabe ukuhlasela sekudlulile, udinga usizo kudokotela ukuze ugweme imiphumela emibi.
Imvamisa kuphakama imibuzo yokuthi iyiphi ingcweti okufanele kuboniswane nayo ukuthola izimpawu ze-pancreatitis ebihlungu kakhulu. Uma lezi zimpawu zenzeka, udinga ukuxhumana nodokotela wezokwelapha ngubani, ofundile ngesimo sesiguli, ozonikeza udluliselwe kudokotela osebhedlela. Uzokwenza isifundo futhi anqume imishanguzo yokuphuza imithi futhi ulandele nokudla okuqinile. Uma kunesidingo, uzodinga ukubonana nodokotela ohlinzayo nabanye ochwepheshe.
Yiluphi ukwelashwa oludingekayo
Ngemuva kokuthi ukuhlasela kudlulile, awukwazi ukudla ukudla, lokhu kungavusa amandla. Noma kunjalo, akufanele uzibeke umkhawulo ekuphuzeni. Ochwepheshe batusa ukuphuza amanzi abilisiwe noma itiye elinoshukela.
Ungabuqeda kanjani ubuhlungu obukhulu nge-pancreatitis, iziguli eziningi zinesithakazelo. Ngemuva kokuthi isiguli silaliswe esibhedlela, kunqunywa ama-painkiller.
Esibhedlela, bazowuhlanza umzimba, bafake amaconsi adingekayo, banikeze izidakamizwa ezisiza ukubuyisa ama-pancreas futhi banciphise ukuvuvukala .. Izidambisigciwane zibekelwa kanye nale mishanguzo, njengoba isimo sengqondo sesiguli siba sibi kakhulu ngesikhathi sokwelashwa. Futhi, uma kunesidingo, ukwelashwa okulwa namagciwane, i-pancreatic enzyme inhibitors, ukufakwa kwezixazululo zamaprotheni nosawoti kuyenziwa.
Uma kungekho ukwelashwa okufanelekile, khona-ke ukuhlaselwa kwansuku zonke kungaholela ekubhujisweni kwesitho nokufa. Ngakho-ke, noma ngabe kungenzeka ukuthi kususwe i-pain syndrome, kufanele uthinte isikhungo sezokwelapha ngokushesha ukuthola imbangela yaso.
Ukuvimbela ngemuva kokuhlaselwa
Kwi-pancreatitis engapheli, ukugula kunganda, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi ungabuyisa kanjani ukuvuvukala kwepancreatic ekhaya. Yiziphi izidakamizwa okufanele ziphuzwe ezimweni ezithile zizokwazi ukuthatha udokotela oholayo, futhi anikeze nomthamo wazo. Usizo lokuqala olwenzelwe i-pancreatitis ekhaya luzosiza ukuvimbela izinkinga futhi lungasindisa impilo yomuntu.
Ukuthi wenzeni nge-pancreatitis ekhaya, uma kuvela ukwanda njalo. Kubalulekile ukuthatha yonke imishanguzo ebekwe udokotela wakho bese ulandela ukudla okhethekile. Ngemuva kwakho konke, izinhlungu nge-pancreatitis zivame ukwenzeka ngenxa yokwephulwa kwemithetho yokudla okunempilo. Okungukuthi, ukudla okubabayo, okunamafutha noma ukudla okumnandi ngokweqile. Ngenxa yalokhu, ukuphuma kwejusi le-pancreatic kuyaphazamiseka, ukwakheka kwawo kuyashintsha, nomuntu ubonakalisa izimpawu ezinjengokucanuzelelwa kwenhliziyo nokuhlanza. Ukuhambisana nokudla kuzokukhohlwa ngokwanda kwalesi sifo.
I-pancreatitis engapheli ingaba cishe i-asymptomatic, kepha iningi leziguli lisathola isicanucanu ngezikhathi ezithile kanye nokungakhululeki. Kungenzeka ukuthi unqume ukuthi ukukhuphula amandla sekuqale ngokuwohloka okubukhali kulesi simo. Isiguli sizwa izinhlungu emgodleni ongaphezulu wesibeletho, kwesinye isikhathi siqinile kangangokuba impumuzo iza kuphela lapho amadolo ecindezelwe esiswini. Ngaphezu kwalokho, isicanucanu siyaqina, ngesinye isikhathi siphela ngokuhlanza, isiphithiphithi se-stool kanye ne-flatulence siyabonakala.
Ngokuvamile, ukwelashwa okwanda kwe-pancreatitis kungenziwa ekhaya. Yi-20% yeziguli kuphela ezidinga ukulaliswa esibhedlela nokunakekelwa kwezokwelashwa ngokushesha. Kepha kusanconyelwa ukubiza udokotela. Ngemuva kwakho konke, yingcweti kuphela ekwazi ukuhlukanisa ukukhuphuka okuvamile kusuka ezimweni ezinzima kakhulu. Ngokushesha ngangokunokwenzeka, udinga ukubona udokotela ngokunyuka kwezinga lokushisa, ukwehla kwengcindezi, nobuhlungu obukhulu obungadluleli ekuthatheni i-antispasmodics.
Ngemuva kwakho konke, izimpawu ezinjalo zingahambisana nokwanda okujwayelekile kwe-pancreatitis engapheli noma kuzokhombisa izinkinga ezinkulu kakhulu. Ngemuva kwakho konke, noma ngabe lesi sifo singezinhlungu, ama-pancreas asatholwa. Ngefomu le-pathology engapheli, ukubhujiswa kwamaseli wesitho kungaqhubeka kancane. Lokhu kungaholela emiphumeleni efana necrosis, ukuvuvukala kwe-purulent, ukuvela kwesimila, ukuqhekeka kweziqubu zesikhumba. Zonke lezi zimo zidinga ukunakekelwa kwezokwelashwa ngokushesha. akwamukeleki ukuphathwa ekhaya.
Kepha ukukhuphuka okujwayelekile kobunzima obumnene noma obulinganiselwe kungasuswa kahle ngokuzimela. Imvamisa ukuhlasela kuyaphela emavikini angama-1-2, kepha uma kungezinsuku ezingama-3-5 isiguli singazizwa siphumule, kufanele usaya kudokotela.
Indlela yokusebenza yokwelashwa okuqhubekayo
Akukho ukwelashwa kwansuku zonke kwe-pancreatitis esigabeni esibuhlungu. Ngemuva kwakho konke, isifo ngasinye siqhubeka ngokuhlukile. Kodwa noma yiziphi izindlela kufanele kuhloswe ngazo ukudambisa izinhlungu nokubuyisa ukusebenza okuvamile kwamanyikwe.
Kulokhu, ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kuyasetshenziswa. Ngaphezu kwemithi ekhethekile ebekwe udokotela wakho, udinga ukudla okukhethekile. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa izindlela zesintu, yenza umthambo wokuzivocavoca, ukuhlikihla umzimba, ukuqinisa umzimba.
Ukwelashwa kokuhlaselwa kwe-pancreatitis ekhaya akupheli ngaphandle kwemithi. Ekuqaleni, kuthathwa ama-antispasmodics noma ama-analgesics kuphela. Basiza ukudambisa izinhlungu. Ngaphezu kwalokho, ezinsukwini zokuqala, udokotela angancoma ukuthatha izidakamizwa ezivimbela imisebenzi ye-pancreatic enzyme. Kulokhu, iTrasilol, Octreotide, Contrical inqunyelwe, kanye ne-H2 histamine receptor blockers - Famotidine, Ranitidine. I-Omeprazole namanye ama-proton pump inhibitors nawo ayasebenza.
Ngemuva kokuthi isiguli siqale ukudla, kudingeka sizilungiselele. Ziyadingeka ukuze ungathwali umthwalo wamanyikwe futhi uthuthukise ukugaya ukudla. I-Pancreatinum, iFestal, iPenzistal, iMezim ingabekwa. Kepha okusetshenziswa kakhulu yiCreon, iHermitage, iPanzinorm noma i-Digestal. Zibhekwa njengezisebenza kakhulu.
Izidakamizwa ezisele zisetshenziselwa ngokuya ngezici ngazinye zenkambo ye-pancreatitis. Nge-acidity eyandayo, kubekwa ama-antacid - Maalox, Fosfalugel, Almagel. Nge-bloating noma i-nausea - ama-prokinetics: I-Motilium, i-Tserukal, i-Domperidon. I-Enterosgel, iHilak Forte, iPolysorb, iLopedium isetshenziselwa ukwenza isitulo sijwayelekile futhi siyeke nohudo.
Ukudla okunempilo okwandisa i-pancreatitis cishe kuyindlela ebaluleke kakhulu yokwelashwa. Azikho izidakamizwa ezingasiza ukudambisa ukuhlaselwa uma isiguli singakulandeli ukudla. Ngokuvamile kunconyelwa ezinsukwini zokuqala ezingama-2-3 zokuxhamazela ukushiya ngokuphelele noma yikuphi ukudla. Uma isiguli sizwa ukukhululeka, ngosuku lwesithathu, ungavula kancane kancane izitsha ezilondolozayo. Ekuqaleni kwakuyi-jelly, i-mucous porridge, isobho semifino ecubuziwe. Uma izimpawu ezingathandeki zingabuyi, ngakusasa ukudla kungasuswa.
I-Steam omelet, isouffle yenyama, amazambane abunjiwe ayavunyelwa. Imikhiqizo yobisi olu-sour, ushizi wekhokho onamafutha amancane, ama-apula abhakwe, izihlahla ezinshukela ezivela enyameni enamafutha amancane zifakwa kancane kancane. Ngemuva cishe kwesonto, uma kungekho okonakala, ukudla kudlondlobala nangaphezulu. Basebenzisa imifino ebhakwe nezithelo, okusanhlamvu, amasobho, pasta. Ungadla i-buckwheat, inyama engenamafutha nenhlanzi enamafutha amancane, uwoyela wemifino, imikhiqizo yobisi, isinkwa esimisiwe noma sesinkwa esimhlophe izolo.
Kunconywa ukusebenzisa amanzi amaminerali. Kungcono uma udokotela ekhetha, njengoba enamaminerali ehlukile futhi kungaholela ekuwohlokeni. Kaningi nge-pancreatitis, batusa ukuphuza iBorjomi, iNarzan, iSmirnovskaya. Kuyo udinga ukukhipha amagesi, ukufudumala kumazinga okushisa egumbini futhi uphuze u-150-200 ml isigamu sehora ngemuva kokudla.
I-Alcohol, iziphuzo ezinekhabhoni, ikhofi, i-cocoa azifakwa ngokuphelele ekudleni kwesiguli nge-pancreatitis. Awukwazi ukudla inyama enamafutha, inyama ebhemayo, ne-offal. Ukudla akumele kuthosiwe, kuphekwe kuphela noma kubhakwe. Kuyadingeka ukwenqaba i-muffin, amakhekhe, u-ayisikhilimu, ushokoledi. Ubhontshisi, amakhowe, isithombo, u-anyanisi, ugalikhi neminye imifino equkethe ama-coarse ayingozi kuma-pancreas.
Faka ezinye izindlela ngemuva kokubonana nodokotela. Kunconywa ukuba uzisebenzise lapho izimpawu zokuvuvukala okunamandla zithoba okuncane futhi nobuhlungu buncipha. Ngempela, ngalesi sikhathi kuvunyelwe kuphela ukuphuza amanzi. Ngokuhlwa kosuku lwesibili lokuhlaselwa, uma kukhona ukuthuthuka, ukwamukelwa kwe-rosehip decoction kuvunyelwe. Futhi kuphela emva kwezinsuku ezimbalwa, lapho isiguli sihluka kancane kancane ekudleni kwakhe, kufakwa neminye amakhambi abantu. Isimo esiyinhloko ukuthi kufanele kube indlela yokusiza ekwelapheni, ngesikhathi sokukhulisa, awukwazi ukwenqaba ukuthatha umuthi nokudla.
Ngokuvamile kunconywa ukusebenzisa i-decoction yama-oats ukukhuphula i-pancreatitis. Inempahla yokumboza, i-analgesic ne-anti-inflammatory, ithuthukisa ukugaya nomzimba wamathumbu. Ukuze ulungiselele umuthi, ama-oats okusanhlamvu kudingeka afakwe emanzini, bese ephekwa isikhathi eside. Ngakho-ke, iziguli eziningi zisebenzisa i-oatmeal. Kuthululelwa ngamanzi bese kubilisiwe imizuzu eminingana. Ijelly ephumayo idinga kuphela ukukhohliswa futhi ungaphuza ingilazi ngaphambi kokudla ngakunye.
Isiza ngempumelelo isimo sesiguli futhi nejusi yamazambane. Njalo lapho udinga ukupheka ingxenye entsha. Imvamisa ngokwanele amazambane aphakathi nendawo angama-2-3. Zidluliswa nge-juicer noma zichotshoziwe futhi zifakwe ujusi ngesandla. Udinga ukuphuza isigamu sehora ngaphambi kokudla kaningana ngosuku.